GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Toba) Bengali Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Marathi Mauritian Creole Maya Mizo Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nias Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Uruund Venda Vietnamese Wallisian Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Akụkọ Josef Mutke kọrọ
A MỤRỤ M N’AFỌ: 1953
NDỤ M BIRI: ILE NDỊ GBA ỌTỌ RIRI M AHỤ́
N’afọ 1949, papa m si Jamanị kwaga Ọstrelia. Ọ gara ịchọ ọrụ n’ebe a na-egwupụta akụ̀ ndị dị́ n’ime ala nakwa n’ụlọ ọrụ ndị na-enye ọkụ. Ọ gara biri n’ime ime obodo dị na Viktoria. Ebe ahụ ka ọ nọ lụọ mama m, ha amụọkwa m n’afọ 1953.
Mgbe afọ ole na ole gachara, mama m malitere iso Ndịàmà Jehova amụ Baịbụl. Ọ bụ ya mere m ji mata ọtụtụ ihe na Baịbụl mgbe m ka dị obere. Ma, papa m enweghị ihe o ji okpukpe ọ bụla kpọrọ. Ọ na-akụ ndị mmadụ ihe, na-amajakwa ha. Mama m na-atụkwa ya ụjọ. Ọ na-anọ ebe papa m na-agaghị ahụ ya na-amụ Baịbụl, ihe ọ na-amụtakwa na-atọ ya ụtọ. Ọ na-abụ papa m pụọ, mama m akụziwere mụ na nwanne m nwaanyị ihe ọ na-amụta na Baịbụl. Ọ gwara anyị na ụwa ga-aghọ paradaịs, gwakwa anyị na anyị ga na-enwe obi ụtọ ma anyị na-eme ihe Baịbụl kwuru.—Abụ Ọma 37:10, 29; Aịzaya 48:17.
Akwapụrụ m n’ụlọ anyị mgbe m dị afọ iri na asatọ n’ihi otú papa m si emesi onye ọ bụla ike. Ọ bụ eziokwu na ama m na ihe mama m kụziiri m si na Baịbụl, ejighị m ya kpọrọ ihe. Ọ bụ ya mere na emeghị m ihe ndị ahụ m mụtara na Baịbụl. Ebidoro m ịrụ na ngalaba na-awaya ọkụ n’ụlọ ọrụ ndị na-egwupụta kol. Mgbe m dị afọ iri abụọ, alụrụ m nwaanyị. Anyị mụrụ ada anyị afọ atọ anyị lụchara. Ebidokwara m ichebara ihe kacha mkpa ná ndụ m echiche. Ebe m ma na Baịbụl ga-enyeliri ezinụlọ m aka, amalitere m iso otu Onyeàmà Jehova na-amụ Baịbụl. Ma, nwunye m achọghị iji anya ahụ Ndịàmà Jehova. Ụbọchị mbụ m gara ọmụmụ ihe ha lọta, ya asị m kwụsị ịmụ Baịbụl, ma ọ́ bụghị ya, anyị ekewaa. Amaghịzi m ihe m ga-eme eme. M kwụsịziri iso Ndịàmà Jehova amụ ihe ka obi dị ya mma. Ma, o mechara wute m na m hapụrụ ime ihe m kwesịrị ime.
Otu ụbọchị, ndị mụ na ha na-arụkọ ọrụ gosiri m foto ndị gba ọtọ. Ọ tọrọ m ụtọ, ma obi m nọ na-ama m ikpe. Echetara m na Baịbụl kwuru na ihe a m na-eme adịghị mma, obi m na-agwakwa m na Chineke ga-ata m ahụhụ. Ma, ka m nọgidere na-ele foto ndị gba ọtọ, obi m kwụsịziri ịna-ama m ikpe. Nwayọọ nwayọọ, ile ndị gba ọtọ bịara rie m ahụ́.
Sí mgbe ahụ ruo ihe karịrị afọ iri abụọ, àgwà ọjọọ bịara mara m ahụ́, o nweghịzi ihe mama m kụziiri m na-abata m n’uche. Ihe ọjọọ ndị m na-amụta ka m bịaziri na-eme. M malitere ịna-ekwu okwu iberiibe, na-amakwa njakịrị iberiibe. Ewereghịzi m ịkwa iko ka ihe ọjọọ. Ọ bụ eziokwu na mụ na nwunye m ka bi, mụ na ụmụ nwaanyị ndị ọzọ na-akwa iko. Otu ụbọchị, m lere onwe m n’enyo, gwa onwe m, sị, ‘Ị daala iberiibe.’ Onwe m bịaziri na-asọ m oyi.
Mụ na nwunye m mechara gbasaa, ndụ m aghasaakwa. Ejizi m obi m niile rịọ Jehova ka o nyere m aka. Ọ bụ eziokwu na o meela afọ iri abụọ m kwụsịrị ịmụ Baịbụl, ebidoghachiri m ịmụ Baịbụl. Papa m anwụọla mgbe ahụ, mama m emeekwala baptizim, ghọọ Onyeàmà Jehova.
Ndụ m na-ebi dị ezigbote iche n’ụdị ndụ Baịbụl kwuru mmadụ kwesịrị ịna-ebi. Ma, ekpebiziri m na m ga-ebiwe ndụ otú Baịbụl kwuru ka m nwee ike inwe udo nke Chineke na-enye. Ekpebiri m ịkwụsị ikwu okwu rere ure, iwe iwe ọkụ, ịkwa iko, ịgba chaa chaa, ịṅụ oké mmanya, na izu ọga m ohi.
Ndị ọrụ ibe m aghọtaghị ihe mere m ji na-agbasi mbọ ike ịgbanwe ndụ m. Ha gbagidere mbọ ruo afọ atọ ka ha mee ka m bidokwa ibi ndụ ọjọọ ahụ m na-ebibu. Ọ bụrụ na e nwee mgbe m na-ejidelighị onwe m, wee ezigbo iwe ma ọ bụ kwuo okwu ọjọọ, ha niile na-eji ọṅụ tie, sị: “Ehee! Ugbu a ka i mere ka Joe anyị ma.” Ihe a ha na-ekwu na-agbawa m obi. Ụdị ihe a mee, ọ na-adịkarị m ka enweghịzi m mmekwata.
I rute n’ebe m na-arụ ọrụ, ị ga-ahụ foto ndị gba ọtọ n’ebe ọ bụla i lere anya, ma na kọmputa ma n’ekwentị ma n’akwụkwọ nkịtị. Ọ na-abụ onye nweta foto ndị gba ọtọ, ya ezigara ibe ya na kọmputa. M na-esobukwa ha eme ụdị ihe a. Ka m na-agba mbọ ịkwụsị ile foto ndị gba ọtọ, ha ana-ezitere m ha na kọmputa. Akọọrọ m onye na-amụrụ m Baịbụl ihe a ka o nyere m aka. O gere m nnọọ ntị ka m na-akọrọ ya otú obi dị m. Ọ gụụrụ m amaokwu Baịbụl dị iche iche ga-enyere m aka ịkwụsị àgwà a ririla m ahụ́. Ọ gwakwara m ka m na-ekpe ekpere mgbe niile, na-arịọ Jehova ka o nyere m aka.—Abụ Ọma 119:37.
N’ebe m na-arụ ọrụ, e nwere ụmụ nwoke abụọ gwara anyị na ha achọghịzi ịbụ ndị aṅụrụma. Otu ụbọchị, agwara m ndị ọrụ ibe m ka anyị zukọọ, na o nwere ihe m chọrọ ịgwa ha. Mgbe anyị zukọrọ, m gwara ha ka ha nye ụmụ nwoke abụọ ndị ahụ biya, ha niile asị: “Mbanụ! Ị ma na ha achọghịzi ịbụ ndị aṅụrụma.” M gwaziri ha, sị: “Mụnwa achọghịzikwa ịna-ele ndị gba ọtọ.” Ụbọchị ahụ ka ha ghọtara ihe mụ na ya na-alụ kemgbe ha na-enye m nsogbu. Ha enyeghịzikwa m nsogbu ọzọ.
Nwayọọ nwayọọ, Jehova nyeere m aka mụ akwụsị ile ndị gba ọtọ. N’afọ 1999, e mere m baptizim, mụ aghọọ Onyeàmà Jehova. Obi dị m ụtọ na Jehova nyeere m aka mụ ebidokwa biwe ndụ dị mma.
Aghọtala m ugbu a ihe mere Jehova ji kpọọ ihe ndị ahụ m hụburu n’anya asị. Ebe ọ bụ Nna hụrụ m n’anya, ọ chọghị ka nsogbu na-abịara ndị na-ele ndị gba ọtọ bịara m. Ilu 3:5, 6 kwuru, sị: “Jiri obi gị dum tụkwasị Jehova obi, adaberekwala ná nghọta gị. N’ụzọ gị niile, mara ya, ya onwe ya ga-emekwa ka ụzọ gị kwụrụ ọtọ.” Achọpụtala m na ihe a Baịbụl kwuru bụ eziokwu. Ime ihe ndị m na-amụta na Baịbụl na-echebe m, na-emekwa ka ihe na-agaziri m.—Abụ Ọma 1:1-3.
Onwe m na-asọbu m oyi, mana ugbu a, ama m na o nwere ihe m dị mma ya, obi na-erukwa m ala. M na-ebizi ndụ dị mma. Amakwa m na Jehova agbagharala m nakwa na ọ na-enyere m aka. N’afọ 2000, alụrụ m ọmarịcha nwaanyị aha ya bụ Karolin. Ọ bụ Onyeàmà Jehova ibe m. Ọ hụrụ Jehova n’anya otú mụnwa hụkwara ya. Anyị na-ebi n’udo. Obi na-atọgbu anyị atọgbu na anyị nọ n’ọgbakọ Chineke dị ọcha, ọgbakọ ndị nọ na ya n’ụwa niile hụrụ ibe ha n’anya.